Archive du 15-juin-2022
Tsy ampy solika, milina simba,… Lasa mpandrindra delestazy sisa ny Jirama
Niaiky ny Jirama tarihin’ny Tale Jeneraliny vonjimaika Rivo Radanielina omaly 14 jona 2022 fa maro ny olana mahazo ny Jirama, mahatonga ny delestazy tsy miato io,
Fitantanan-dRajoelina Potika avokoa ireo orinasam-panjakana
Lesoka tany aloha ny resaka “privatisation” na fanomezana sy famarotana ho an’ny tsy miankina ny orinasam-panjakana. Ankehitriny, misy ihany ny fivoizana an’io,
Dany Rakotoson “Nofinofy izany fifidianana milamina izany”
Nofinofy ihany angamba ny hisian’izany fifidianana milamina izany, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Dany Rakotoson. Ady foana io hatrany ivelany, hoy izy.
Karana sy Sinoa sarona teny Ivato Nasisika tao anaty fitombenana ny bolongam-bolamena
Nahasaronana trafikana harena an-kibon’ny tany indray teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato.
Hetsika politika Omeo alalana izay mahafeno fepetra, hoy ny SYNAD
Nahitsy ny SYNAD (Syndicat National des Adminisitrateurs Civiles) tarihin’ny Filohany Paolo Raholinarivo omaly nanao fanambarana manoloana ny sakantsakana amin’ny hetsika politika,